International Financial Reporting System ကို ပိုမိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးချနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ Win Thin Academy နှင့် ပူးပေါင်း ပို့ချပေးမည့် IFRS Training ဖွင့်လှစ် – Max Myanmar Group
International Financial Reporting System ကို ပိုမိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးချနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ Win Thin Academy နှင့် ပူးပေါင်း ပို့ချပေးမည့် IFRS Training ဖွင့်ပွဲကို ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လ (၉)ရက်နေ့က ကုမ္ပဏီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ Group CEO နှင့် Group HR Director တို့ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့သည်။
အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း (Public Interest Entities) တစ်ခုဖြစ်သည့်အလျောက် International Financial Reporting System ကို စနစ်တကျ လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် မက်စ်မြန်မာ ကုမ္ပဏီအုပ်စုအနေဖြင့် အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ (၂)ရက်ကြာ ပို့ချပေးမည့် အဆိုပါ သင်တန်းသို့ မက်စ်မြန်မာဟိုးဒင်းနှင့် ကုမ္ပဏီခွဲ အသီးသီးတို့မှ Financial Controller များနှင့် Accountant ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း (၃၇)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
Older PostMax Myanmar Group of Companies နှင့် AYA Financial Group ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်သည် ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Martin Tlapa နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jaroslav Doleček တို့အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ
Newer PostMax Myanmar Holding နှင့် Win Thin Academy တို့ ပူးပေါင်း၍ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည့် IFRS Training သင်တန်းဆင်းပွဲ